Kedu ụzọ kachasị mma iji kwalite webinar gị?
Na 2013, 62% nke B2B ji webinars iji kwalite ụdị ha, nke sitere na 42% afọ gara aga. O doro anya, webinars na-enweta ewu ewu na ha na-arụ ọrụ dị ka onye na-eduga ọgbọ ngwá ọrụ, obughi nani ngwa ahia. Kedu ihe kpatara ị ga - eji tinye ha na atụmatụ azụmaahịa gị na mmefu ego gị? N'ihi na webinars nọ n'ọkwá dị ka usoro kachasị dị elu na-eduga ndị nduzi ruru eru.
Na nso nso a, mụ na onye ahịa na arụ ọrụ webinar na-arụ ọrụ, ReadyTalk, na ọdịnaya ụfọdụ maka omume kacha mma webinar na ihe kpatara ọnụ ahịa kwa ndu ji baa uru. Ọbụghị naanị na achọtala m nnukwu ọnụọgụ webinar, mana anyị ga-etinye ha n'ọrụ na usoro webinar nke anyị na-abịa onye nlekota oru nlekota oru, Meltwater (nọrọ na-ekiri!).
Yabụ, lee usoro ndụmọdụ webinar 10 kacha elu ị kwesịrị ịgbaso mgbe ị na-eme atụmatụ maka webinar na-esote gị:
Bido ịkwalite webinar gị opekata mpe otu izu tupu mmemme ahụ - Maka nsonaazụ kacha mma, bido n’izu atọ. Ọ bụ ezie na ihe ka ọtụtụ n’ime ndị na-edeba aha gị ga-edebanye izu nke webinar, nke ahụ apụtaghị na ị gaghị amalite ịkwalite n’oge. Dị ka 2013 Webinar Benchmark Report, na-amalite nkwalite ọ dịkarịa ala ụbọchị asaa ma ọ nwere ike ime ka ị debanye aha gị karịa 36%! Pasent ndị ahụ na-amalite ịgbada, yana ụbọchị 2 ruo 7 na 27%, ụbọchị tupu 16%, yana ụbọchị na 21%.
Jiri email dị ka ụzọ bụ isi iji kwalite webinar - Dabere na nyocha nke ReadyTalk, email ka dị ka ụzọ kachasị elu iji kwalite webinar, yana 4.46 nke 5. Thezọ nke abụọ iji kwalite bụ mgbasa ozi mmekọrịta, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isi abụọ zuru oke na 2.77. I nwekwara ike ahu nagide Webinar nkwalite saịtị dị ka Brainy Octopus.
Abịa na webinars, 3 bụ anwansi nọmba maka email mkpọsa gbapụ - Nyere na ị na-amalite webinar nkwalite ọ dịkarịa ala otu izu, mgbasa ozi email atọ bụ ọnụọgụ kachasị maka nkwalite webinar:
Zipu mgbasa ozi mbụ iji kwalite webinar gị, na-ekwu okwu banyere isiokwu ahụ na nsogbu ọ ga-edozi maka ndị na-ege ntị na ahịrị isiokwu ahụ.
Zipu ozi-e ọzọ ụbọchị ole na ole ka nke a gasịrị site na iji akara isiokwu tinyere ndị ọbịa okwu ọ bụla ma ọ bụ asụsụ a rụpụtara
Maka ndị debanyere aha, zipụ ozi ụbọchị nke mmemme iji mee ka ndị bịara abịa
Maka ndị ka kwesiri ịdebanye aha, zipụ ozi ụbọchị nke mmemme iji mee ka ndebanye aha
Ị maara? The nkezi akakabarede ọnụego maka edebanye aha na onye bịaranụ bụ 42%.
Ziga ozi ịntanetị na Tuesday, Wednesde, ma ọ bụ Thursday - The ụbọchị na ndị kachasị edebanye aha bụ Tuesday na 24%, Wednesde na 22%, na Tọzdee na 20%. Nọgide n'etiti izu iji jide n'aka na anaghị eleghara ma ọ bụ ehichapụ ozi ịntanetị gị.
Ị maara? 64% nke ndị mmadụ na-edebanye aha maka webinar izu nke ihe omume dị ndụ.
Nabata webinar gị na Tuesday ma ọ bụ Wednesde - Dabere na nyocha na data nke ReadyTalk, ụbọchị kachasị mma n'izu iji kwado webinars bụ Tuesday ma ọ bụ Wednesde. N'ihi gịnị? N'ihi na ndị mmadụ na-ejide Monday, ha dịkwa njikere maka ngwụsị izu site na Tọzdee.
Nabata webinar gị na 11AM PST (2PM EST) ma ọ bụ 10AM PST (1PM EST) - Ọ bụrụ na ị na-enwe mba webinar, mgbe ahụ oge kachasị mma iji kwado usoro onye ọ bụla gafee mba ahụ bụ 11AM PST (22%). 10AM PST biara na nke abuo na 19%. Ka ọ na-eru nso n’oge nri ehihie, ndị na-anaghị enwekarị ohere ịga nzukọ ma ọ bụ ịchụkwudo ụtụtụ.
Mgbe niile, oge niile, webinar gị dị na-achọ mgbe ihe omume gasịrị (ma kwalite na ị ga-eme ya). - Dị ka anyị niile maara, ihe anyị na-atụghị anya ya na-abịa n’oge anyị. Jide n'aka na ndị na-edebanye aha gị mara na ha nwere ike ịnweta webinar na-achọ, ọ bụrụ na ha agaghị enwe ike ịga ma ọ bụ na ha chọrọ ige ya ma emechaa.
Debe mpempe ndebanye aha gị na ngalaba 2 gaa na 4. - The kasị elu n'ịtụgharị ụdị dị n'etiti 2 - 4 ụdị ubi, ebe mgbanwe nwere ike ịbawanye site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 160%. Ka ọ dị ugbu a, nkezi ntụgharị mgbe mmadụ rutere peeji ọdịda maka webinar bụ naanị 30 - 40%. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị ka ọnwụnwa ịrịọ maka ozi ndị ọzọ n'ụdị ka ị wee nwee ike iruzu atụmanya ndị ka mma, ọ dị mkpa karịa ịbịaru ha na webinar karịa ịtụfu ha na ọtụtụ ụdị. Nke na-ewetara m isi okwu m ọzọ…
Jiri ntuli aka na Q&A iji kpokọta ozi ndị ọzọ gbasara atụmanya gị. - 54% nke ndị ahịa jiri ajụjụ mee ka ndị na-ege ha ntị wee jiri 34% mee ntuli aka, dị ka data ReadyTalk. Nke a bụ ebe ị nwere ike ịmalite mkparịta ụka na atụmanya gị ma mụtakwuo banyere ha. Na, n'ikpeazụ…
Ighaghachi na-ozugbo. - Tupu ị na-eduzi webinar dị ndụ, gbaa mbọ hụ na ị dị njikere ịmegharị ọdịnaya ahụ ozugbo iji mee ka njikọta dịkwuo elu ma gbaa ndị ọzọ ume ka ha nwee mmasị:
89% nke ndị mmadụ na-atụgharị webinar n'ime post blog. Jide n'aka na ịhazi oge ị ga-apụ ozugbo webinar, yana njikọ ahụ dị njikere maka ndị na-ege weebụ na-ekwu maka ya ma ọ bụrụ na ha chọrọ ya. Ntuzi ndi ozo: Jiri uzo bit.ly gosiputara iji soro ma mee ka url di nkpumkpu.
Ma ọ bụrụ na onye gị na ndị ọrụ gị na-ebi ndụ-tweet, ma ọ bụ tọọ oge tweets iji pụọ n'oge webinar. You'll ga-enweta mmekọrịta ọha na eze n'oge mmemme ahụ.
Nwee hashtag nke raara nye maka ihe omume ahụ ma mee ka ndị bịara ya mara ka ha nwee ike ịgbaso mkparịta ụka ahụ.
Ọfọn, ọ bụ ya, ndị mmadụ. Enwere m olileanya na ndụmọdụ ndị a dị mfe nyere gị aka n'ịkwalite webinars gị n'ọdịnihu!
Tags: ụbọchị kachasị mma iji nweta webinarụbọchị kachasị mma iji kwalite webinaroge kacha mma iji nweta webinarụzọ kachasị mma iji kwalite webinarụbụrụ octopusesi kwalite webinaresi kwalite webinar gịWebinar Ahịanjikereụzọ iji kwalite webinarnkwalite webinarsaịtị webinar nkwalite
Dee 20, 2013 na 9: 06 AM
Jenụwarị 17, 2014 na 8:34 PM
Ezigbo post Jenn .. Ezigbo ihe ọmụma .. Daalụ maka ịkekọrịta!
Jenn, obi uto m n’ozi gi. Ahụm m na webinars jibes na ọtụtụ ihe ị kwuru. Otú ọ dị, enwere m ọchịchọ ịmara otú ị si kwubie na ọtụtụ ndị na-edebanye aha na-edebanye aha na izu gara aga tupu webinar. Anyị na-ezigakarị na-akpọ ndị mmadụ izu 2-3 tupu oge eruo, na ọtụtụ ndebanye aha anyị na-abịa ozugbo mbido nke mbụ. Ọ ga-amasị m ịnụkwu banyere ahụmịhe gị.
Ndewo Ben! Daalụ maka okwu gị na nzaghachi gị. Achọpụtara m n'ezie data gbasara ndị na-edebanye aha na webụsaịtị webụsaịtị ON24: http://www.on24.com/wp-content/uploads/2013/02/ON24_Benchmark_V8.pdf. Anyị na-ahụkwa nnabata mgbe anyị zipụrụ ozi izizi. Ma, m mere mgbakọ na mwepụ, na webinar ikpeazụ anyị duziri nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-edebanye aha n'ime izu karịa ndị debanyere aha ozugbo email ahụ gachara. Daalụ maka okwu gị ma nwee olileanya na ihe ga-adị mma!
Atụmatụ dị mma. Ana m akwado webinar mbụ m na izu 2 ka m wee nwee ike iji ọtụtụ ndụmọdụ ndị ahụ m nwere ike.
Jun 14, 2014 na 1:47 AM
Atụmatụ dị ukwuu! N'ezie, otu n'ime ndepụta kachasị mma nke nkwalite mgbasa ozi webinar abịarutere m na nyocha m! Ọ bụ ezie na ụfọdụ ga-asị na ha agaghị agwa gị ka ị weghachite webinar gị. Expertsfọdụ ndị ọkachamara na-ekwu mgbe ndị na-ege gị ntị maara na a ga-enwe egwu a ga-enweta, nkuzi nkuzi nke ndị ọbịa.
Ọkt 7, 2014 na 7:45 PM
Nke a bụ ezigbo isiokwu
Nov 6, 2014 na 5:45 PM
Anyị na-eme atụmatụ ijide webinar ma emechaa ọnwa a. Anyị ga-eji ntụnye ndị a iji jikere maka ya.
Ihe ga-adị mma ma ọ bụrụ na ịnwere ike itinye usoro nhazi webinar.
Nov 7, 2014 na 11:08 AM
Richard, nke ahụ bụ echiche magburu onwe ya! Aga m etinye nke ahụ n’ahịrị anyị. Daalụ!
Mee 10, 2015 na 3: 07 PM
ikenyeneke mbiet post !!!
Mee 15, 2015 na 2: 26 PM
Obi dị m ụtọ na achọtara m ọkwa gị! Anyị na-amalite ịgbasawanye ọrụ agụmakwụkwọ site na webinars ma n'ezie enweghị ebe anyị ga-esi bido! You na-eme ndụmọdụ ọ bụla ma ọ bụ nyere aka na ụdị ihe a? Anyị bụ ụlọ ọrụ Apple na-akwado ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ na etiti Florida.
Mee 17, 2015 na 9: 35 PM
Ndewo Terry! Aga m enyefe ozi gị n’aka Jenn onye dere nke a ma nyere anyị aka webinars anyị niile!
Jul 4, 2015 na 6:12 PM
Daalụ maka post na-adọrọ mmasị. Ahuru m na ikwughi mgbede maka webinars.
Ọ bụ na ha agaghị adị mma?
Ọ bụrụ na ọ bụ azụmaahịa ụlọ nke ụdị a agaghị abụ ezigbo oge yana oge na ụbọchị ị ga-atụ aro
Jul 19, 2016 na 11: 10 AM
Ezigbo ndụmọdụ Jenn! Ruo nke a bụ ihe ezi uche dị na webinar metụtara nke m hụrụ na Google! Ndi ozo enweghi nkenke dika nke gi. Daalụ maka Ama ahụ!
Jul 19, 2016 na 2:14 PM
Daalụ nke ukwuu, Iris! Achọrọ m imelite ya maka 2016, mana m ga-asị na ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ oge niile maka nkwalite webinar. Biko mee ka m mara ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla! dị obi anụrị ị nyere aka.
Nnukwu ozi ebe a Jenn. Ahụla m ka ndị mmadụ na-akwalite webinar ha na ntanetị mmekọrịta; Facebook bụ nnukwu na nke kachasị mma. Can nwere ike ime nke a na akaụntụ nkeonwe gị ma ọ bụ melite akaụntụ azụmahịa ma na-agba ọsọ mgbasa ozi mgbasa ozi na-akwụ ụgwọ ezubere iche. Daalụ maka ịkekọrịta!